News - companylọ ọrụ anyị nyere National High-tech Enterprise Certificate Na Disemba 2, 2019.
"Sayensị bụ ihe dị mkpa na-akwọ ụgbọ ala maka mmepe, okwu ahụ bụ" ụlọ ọrụ teknụzụ ọhụrụ na nke dị elu "na-ezo aka na isi ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike ọgụgụ isi nwere site na nyocha na mmepe na-aga n'ihu yana mgbanwe nke ihe ọgbara ọhụrụ na teknụzụ" New and High Technology Field na-akwado ya Ọchịchị ”. Na ndabere a iji mepụta azụmaahịa. Ọ bụ ihe ọmụma metụtara akụ na ụba na nkà na ụzụ nke ukwuu. ”
Nke a bụ mmasi dị elu nke mba ahụ na nkwado maka nnwepụta nnwere onwe anyị.
Innovation bu ihe bu isi na ebido mmepe nke ulo oru. Anyị ga-agbaso ụzọ nke nnwere onwe nnwere onwe na nkwado ọhụụ, ma na-emeziwanye ikike anyị maka ihe sayensị na teknụzụ na mmepe teknụzụ dị elu.
N'ọdịnihu, anyị ekwesịghị naanị esi ọnwụ na teknụzụ ọhụụ, kamakwa ị attentiona ntị na ihe ọhụụ nke ụlọ ọrụ. Ihe ohuru ohuru bu ihe di nkpa nke oru oru.Ọ bụ isi ihe na-ekpebi usoro mmepe, ogo na ọsọ nke ụlọ ọrụ ahụ. Site na njikwa ụlọ ọrụ niile na arụmọrụ azụmaahịa akọwapụtara, ihe ọhụụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-esite na ngalaba ọ bụla na nkọwa niile. Ihe ohuru ohuru n’enye oru ohuru, ihe ohuru ohuru, oru ohuru, ihe omuma ohuru na uzo ndi ozo nke nsogbu a, na akuku ihe nile nke nsogbu a adighi adi iche iche iji chebara ihe omuma ohuru echiche, kama ichota mmepe nke ulo oru dum, n’ihi na ihe ohuru nke ihe nile putara.
Post oge: Dec-02-2019